Home » Creative Writing » ကြည်နူးစရာ အလှူရက်လေးမှာ (၈)
နားမကျိုင်းကျေးရွာနှင့် မူလခေါင်တုန့်စည်ကျေးရွာကြားလမ်းမှာ ကျနော်တို့ လာရောက်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်လုံး ဆိုးဝါးခဲ့သည်ချည်းသာ…. ယခုနှစ်မှာတော့ မိုးပြတ်သည့်ရက် ကြာနေသည်မို့ အချို့နေရာတွင်သာ လမ်းကပျက်နေပြီး နေရာတော်တော်များများတွင် လမ်းက ခံသာနေပေသည်။ အဖွဲ့ဝင်အင်အားကလည်း နည်းပြီး လမ်းကလည်း မဆိုးတာမို့ ခါတိုင်းနှစ် နားမကျိုင်းနှင့် မူလခေါင်တုန့်စည်ရွာ ၅ မိုင်ခရီးမျှကို ၁နာရီခွဲ ၂ နာရီမျှ မောင်းရသော်လည်း ယခုမူ နာရီဝက်ကျော်ကျော်မျှသာ မောင်းရသည်။ မူလခေါင်တုန့်စည်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းလေးကား ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိ၏။ ဤရွာလေးကား အိမ်ခြေသုံးဆယ်ကျော်မျှသာ ရှိပေလိမ့်မည်။ ယခင်က ရွာပျက်သွားခဲ့ပြီး ယခုနောက်ပိုင်းမှ ရွာပြန်တည်ကာ နေထိုင်နေကြခြင်းပင်။ ရွာလေးအား တောင်တန်းကြီးများက ပတ်ပတ်လည် ကာဆီးထားသကဲ့သို့ ချောင်းလေးမှာလည်း ရွာလေးအား ကွေ့ဝိုက် စီးဆင်းနေပေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလေးမှာ ကုန်းမြင့်လေးတစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိကာ ကြည့်လေမြင်လေရာ နေရာတိုင်း စိမ်းစိမ်းစိုစို အုံ့အုံ့မှိုင်းမှိုင်းနှင့်မို့ လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်၏ မဲဇာတောင်ခြေရတုကိုသာ သတိရမိချေတော့သည်။ ဒီရွာလေးသို့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ စာရေးကိရိယာ ပထမဆုံးလာရောက်လှူဒါန်းကြသည့် ၂၀၁၂/၁၃ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် စာသင်ဆောင်လေးမှာ အပြီးမသတ်နိုင်သေးသဖြင့် ကျောင်းပင်မဖွင့်နိုင်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေပင်…။ ကျနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရာလေးကို myanmargazette.net တွင် ပုံလေးများနှင့်တစ်ကွ စာရေးတင်လိုက်ရာ myanmargazette.net မှ အဖွဲ့ဝင်များ၏ စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းမှု၊ ကူးဆိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး၏ ကမကထအားထုတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုတို့ကြောင့် ၄င်းနှစ်မှာပင် စာသင်ဆောင်လေးအား အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ပေသည်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့မှလည်း သင်ပုန်း၊ အမှိုက်ပုံး၊ ရေလောင်းအိမ်သာခွက်များကို လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့စာသင်ဆောင်လေး အောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားပြီးနောက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်းအဆင့်မှ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားတော့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကလေးများအတွက် မူလတန်းပညာရေးကို ရွာမှ မခွာပဲ သင်ယူရနိုင်သည်မို့ ကျေးဇူးတင်စရာပင်….။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ ကျောင်းလေးဆီသို့ရောက်တော့ နေ့လည်ကျောင်းတက်နေပြီမို့ ဆရာမလေးများ ရောက်နေကြချေပြီ….။ ကျောင်းသား/သူလေးများမှာလည်း ဗလာစာအုပ်၊ ခဲတံ၊ ပေတံ၊ ခဲဖျက်လေးများကို မြင်တော့ ဝမ်းသာသည့် မျက်နှာလေးများကား ဖြူဖြူစင်စင်နှင့် မို့ ချစ်စရာ ကောင်းလှသည်။ ဆရာမလေးများအား စာရေးကိရိယာများလာလှူသည့်အကြောင်းပြောပြတော့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြ၏။ ကျနော်မှ ကျောင်းသားအရေအတွက်ကိုမေးသည့်အခါ ကျောင်းသား/သူ ၂၇ ဦးရှိကြောင်း သိရသဖြင့် လှူဒါန်းမည့် စာရေးကိရိယာများကို ပြင်ဆင်ကာ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလေးများကို ဆရာမလေးအား ပေးအပ်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူလိုက်သည်။ ဤကျောင်းလေးတွင် ဆရာမလေးသုံးဦးမှ တာဝန်ယူ သင်ကြားပေးနေကြခြင်းပင်… အိမ်ခြေနည်းသည့်အကြောင်းကို ဆရာမလေးတစ်ဦးမှ.. “ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီဖွဲ့လိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးတွေနဲ့တင် ရွာကလူတွေကုန်သွားရော အဖွဲ့ဝင်တောင် မရှိတော့ဘူး…”ဟု ရယ်မောကာ ပြောပြသည်။ ကျနောတို့အဖွဲ့ ကလေးများကို စာရေးကိရိယာများ ဝေငနေကြစဉ် ကျေးရွာမှ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင် ကော်မတီဝင်များရောက်လာကြပြီး ကြိုအကြောင်းမထားခြင်းကို စိတ်မကောင်းဟု ပြောနေပြီး ရွာထဲသို့ လိုက်ပြီး နားကြရန်လည်း ဖိတ်ခေါ်နေကြသေး၏။ ကျနော်တို့ ယခင်နှစ်များတွင် ဒီရွာလေးမှာ နံနက်စာစားကြခြင်းပင်… ကျနော်တို့ အဖွဲ့လာမည့်ရက်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားသဖြင့် ရွာမှ နံနက်စာကို ပြင်ဆင်ပေးထားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်မှာတော့ ကြိုတင်အကြောင်းမကြားတော့ပဲ လာရောက် လှူဒါန်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူအင်အား မများခြင်းနှင့် ကျနော်တို့အဖွဲ့အတွက် ရွာသူ/သား အလုပ်ရှုပ် ပင်ပန်းနေကြမည်ကိုလည်း မလိုလားခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။ ကျနော်မှ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများကို ကြိုအကြောင်းမကြားမိသည်ကို တောင်းပန်ပါကြောင်း အပြန်ခရီးမိုးချုပ်မည်စိုးသဖြင့် ရွာထဲသို့လည်း လိုက်မနားနိုင်တော့ကြောင်း တောင်းပန်စကားပြောကြားပြီး … ဆရာမလေးများ၊ ကျောင်းသား/သူလေးများ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင် ကော်မတီဝင်များနှင့် စာသင်ဆောင်လေးရှေ့တွင် အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြသည်။ ပြီးနောက် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ကာ ပြန်ထွက်လာကြတော့ ညနေ ၂ နာရီ ထိုးပြီးချေပြီ။ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်… မူလခေါင်တုန့်စည် ရွာလေးရေ…. နောက်နှစ်လည်း တစ်ခါပြန်ရောက်ချင်ပါသေးတယ်…. ဟု စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်ရင်း…….